बाइबलका कथाहरू: मोर्दकै र एस्तर - यहोवाका साक्षीहरूको आधिकारिक वेब साइट
अब हामी एज्रा यरूशलेम फर्कनुभन्दा केही वर्षअघिको कुरा पढौं है। त्यतिखेर मोर्दकै र एस्तर फारस देशकै सबैभन्दा ठूला इस्राएलीहरू थिए। एस्तर महारानी थिई भने उसको ठूलो बुबाको छोरा मोर्दकै राजामुनिको सबैभन्दा शक्तिशाली मान्छे थियो। उनीहरू कसरी यति ठूला मान्छे भए, हामी हेरौं।
एस्तर सानी छँदा उसका आमाबाबु मरेकोले मोर्दकैले उसलाई पालेको थियो। मोर्दकै फारसका राजा अहासूरसको सेवक थियो। त्यतिखेर शूशन सहरमा राजाको दरबार थियो। एकदिन, राजाकी पत्नी वश्तीले राजाको आज्ञा पालन गर्दिन। यसकारण राजाले वश्तीलाई हटाएर अर्कै नयाँ रानी राख्ने निर्णय गर्छ। उसले कसलाई रोज्छ तिमीलाई थाह छ? हो, उसले तरुनी अनि सुन्दरी एस्तरलाई रोज्छ।
चित्रमा हेर त। मानिसहरू एक जना घमन्डी मान्छेलाई ढोग्दैछन्। उसको नाउँ हामान हो। ऊ फारसको अति नै ठूलो मान्छे हो। त्यहाँ बसिरहेको मोर्दकैले पनि उसलाई ढोगोस् भनेर हामान चाहन्छ। तर मोर्दकैले उसलाई ढोग्दैन। हामान जस्तो खराब मान्छेलाई ढोग्नु मोर्दकैलाई ठीक लाग्दैन। यसले गर्दा हामान साह्रै रिसाउँछ। उसले मोर्दकैलाई खतम पार्ने विचार गर्छ।
हामानले राजालाई इस्राएलीहरूको विषयमा झूटा पोल लगाउँछ। ऊ यसो भन्छ: ‘यी इस्राएलीहरू खराब छन्। तिनीहरू हजुरका ऐन कानुन पालन गर्दैनन्। तिनीहरूको नाउँ निशानै मेटाउनुपर्छ।’ अहासूरसलाई उसकी आफ्नै पत्नी पनि इस्राएली हो भनेर थाह हुँदैन। यसकारण उसले हामानको कुरा सुन्छ र एउटा खास दिन तोकेर सबै इस्राएलीहरूलाई मार्ने हुकुम दिन्छ।
यो हुकुम सुनेपछि मोर्दकै असाध्यै चिन्तित हुन्छ। उसले एस्तरकहाँ यो खबर पठाउँछ: ‘तिमीले राजालाई सबै कुरा भन्नै पर्छ। हाम्रो ज्यान जोगाउन तिमीले राजालाई बिन्ती गर्नुपर्छ।’ तर त्यतिखेर राजाले नबोलाईकन भेट्न जाँदा फारसी कानुनको उल्लंघन हुन्थ्यो। राजाले नबोलाए पनि एस्तर दरबारमा जान्छे। एस्तरलाई देख्ने बित्तिकै राजाले ऊतिर सुनको राजदण्ड तेर्साउँछ। राजाले त्यसरी राजदण्ड तेर्साएको हुनाले एस्तरको ज्यान जोगिन्छ। एस्तरले राजा र हामानलाई ठूलो भोजमा निम्त्याउँछे। भोज खान आएको बेला राजाले एस्तरलाई तिमी के चाहन्छ्यौ भन, भनेर सोध्छ। एस्तरले राजा र हामान अर्को दिन फेरि भोज खान आएको बेला बताउँछु भनेर जवाफ दिन्छे।
राजा रिसले चूर हुन्छ। उसले हामानलाई मार्ने हुकुम दिन्छ। यसपछि, राजाले मोर्दकैलाई आफूमुनिको सबैभन्दा ठूलो पद दिन्छ। त्यसपछि मोर्दकैले नयाँ कानुन बनाउँछ। यो नयाँ कानुनले गर्दा इस्राएलीहरूले उनीहरूलाई हामानले मार्न तोकेको दिनमा आफ्नो रक्षा गर्ने अधिकार पाउँछन्। मोर्दकैले अब ठूलो पद पाएकोले थुप्रैले इस्राएलीहरूलाई मदत गर्छन्। यसरी इस्राएलीहरू आफ्नो शत्रुको हातबाट जोगिन्छन्।
मोर्दकै र एस्तर को हुन्?
राजा अहासूरसले किन नयाँ रानी राख्ने निर्णय गर्छ? उसले कसलाई छान्छ?
हामान को हो र ऊ किन रिसाउँछ?
हामानको कुरा सुनेर अहासूरसले के हुकुम दिन्छ? मोर्दकैको खबर पाएपछि एस्तर के गर्छे?
हामानलाई के हुन्छ अनि मोर्दकैलाई के हुन्छ?
इस्राएलीहरू शत्रुबाट कसरी जोगिन्छन्?
एस्तर २:१२-१८ पढ्नुहोस्।
“नम्र र शान्त आत्मा” विकास गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई एस्तरले कसरी प्रदर्शन गरी? (एस्त. २:१५; १ पत्रु. ३:१-५)
एस्तर ४:१-१७ पढ्नुहोस्।
एस्तरले साँचो उपासकहरूलाई बचाउने मौका पाएझैं आज हामीले यहोवाप्रतिको आफ्नो भक्ति र वफादारी देखाउने कस्तो मौका पाएका छौं? (एस्त. ४:१३, १४; मत्ती ५:१४-१६; २४:१४)
एस्तर ७:१-६ पढ्नुहोस्।
एस्तरले जस्तै आज परमेश्वरका थुप्रै जनले पनि कसरी सतावट भोग्नुपर्ने खतरा मोलेका छन्? (एस्त. ७:४; मत्ती १०:१६-२२; १ पत्रु. २:१२)